SAWIRO:- Madaxwaynayaashii hore ee Somalia oo dib ugu laabtay Muqdisho xilli Hawada wali ay uxiran tahay DFS. | Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
SAWIRO:- Madaxwaynayaashii hore ee Somalia oo dib ugu laabtay Muqdisho xilli Hawada wali ay uxiran tahay DFS.
Previous articleDAAWO:- Hogaamiye Kim Joung Un oo sameeyay dhacdo naftiisa halis gelin kartay….
Next articleXOG:- Siyaasiyiinta Khaatuma oo shir xasaasi ah uga socda Muqdisho “Cali Khaliif oo abaabul aan caadi ahayn wada”.
Madaxweyne Waare” Magaalada Xamar waxaa laga qaadaa 1 Bilyan oo doollar”